Waxa la sheegay in kooxda tplf ay dhaceen hanti ay dawladu lahayd oo ay ka dhaceen wurgeesa iyo wujaale waxana ay ku rarteen 300 oo gawaadhi ah.la xidhiidha gaadiidka – ዜና ከምንጩ
Waxa wargayska addis maleda uu waramay dad goob joogayaal ahaa oo sheegay in meelaha u dhaw dhalanta, wurgeesa iyo wujaale ay kooxda argagixisada ah ee tplf inta ay soo diyaarsadeen 300 oo gawaadhi oo isjiid ah ay ku rarteen hantidi dawlada iyo dhawr shaqsiyaad ah ay lahaayeen.
Sida ay ugu warameen wargayska goob joogayaashu in todobaadki aan soo dhaafnay ee bishan tiqimt gudaheeda ay kooxda argagaxisada ah ee tplf ay qabsadeen meesha la yidhaahdo wurgeesa iyo agagaarkeeda oo ay ku laayeen dad aan tiradooda la hubin intii ay ahaayeen, kadibna gawaadhi ka badan 300 oo is jiid ah ay soo diyaarsadeen oo ay ku rarteen hanta ay lahaayeen dawlada iyo shacabku waxaan ay uu qaateen tigraay.
Dad ka soo barakacay wurgeesa iyo wujaale sida oo kale dhelaanta oo u soo cararay magalada dhase iyo baxardaar ayaa sheegay in ay wadooyinka ay tunaayeen gawaadhi isjiid ah oo loo diyaariyay in alaabo iagu raro oo ka badan 300, waxana ay sheegen in guryaha dadka ay jabsanayeen oo ay ka qaadanayeen alaabo iyo raashinba.
Dadkaasi magalada dhase uu soo cararay 8dii bishan tiqimt ee 2014ka ayaa cadeeyaya in kooxda tplf ay qabsadeen magalo madaxda dagmada ambasal oo 60 km. u jirta magalada dhase, sida oo kale dad tiro badan oo ka soo qaxay magaalooyinka habru iyo hayq ayaa u soo qulqulaya magalada dhase.
Dadkaasi goob joogayasha ah ayaa sheegay in hada ka hor ay qabsadeen beqlo maneqiya iyo sahay mawja meelaha la kala yidhaahdo 8dii bisha tiqimtna waxa ay qabsadeen magaalooyinka wegel iyo teena, cisbitaalka magalada dhelaantana ay bililiqaysteen oo ay ka gurteen qalabkii iyo dawooyinkii halkaasi yilay oo ay ku rarteen gawaadhi.
Waxa kale oo ay sheegeen dadkii halkaasi ku noola in ay soo galeen magalada dhalaanta oo ay qabsadeen kadib marki ciidanka difaacu uu halkaasi ka baxay, wax xabado ah oo halkaasi la isku waydaarsaday ma jirin oo si sahlan ayay kooxda tplf u soo galeen bay yidhaahdeen halkaasi waxaana ay canbaareeyen xaladaasi.
Waxa kale oo ay sheegeen dadkii halkaasi ku noola in sadex todobaad ka hor ay kooxda tplf midhihi beerihi ku yiilay agegaarka gashena ay goosteen oo ay qaateen, waxa hadana lagu garaacay dayuuradaha dagaalka meelihi ay joogeen kadibna halkii way ka baxeen. hadaba xiligi wararkan la soo diyaarinayay ayaa la soo ogaaday in kooxdaasi ay hadana meelihi dib u qabsadeen oo ay bilaabeen in ay biliqaystaan.
Sida oo kale waxa ay sheegeen dadkii halkaasi ku noola in meelihi ay haysteen dib looga saaro, waxaana ay kooxdaasi maqleen in shacabku ay gacan ku lahaayee xiligii halkaasi laga saarayay waxna ay bilaabeen in ay ka aar goostaan shacabki markii ay dib u qabsadeen, waxa ay bilaabeen in ay guryaha dadka inta ay furteen ay ka dhacaan wax alaale iyo wixii ay haysteen.
Xiligii warkan la soo diyaarinayay meesha u dhaxaysa gaashin iyo lalibala ee la yidhaahdo dhibko sida oo kale waadhla dhelaanta iyo jaana agagaarkooda waxa la sheegay in hub culus lagu dagaalamayay, waxana ay sababeen dagaaladaasi in haween iyo caruur aan tiradooda la garanaynin ay ku geeriyoodaan
Dadkaasi goob joogayaasha ahi waxa kale oo ay sheegen in meelaha gaashina, amba gaashina iyo agagaarkooda ay kooxda tplf ka samaysanayaan dhufaysyo, madaama meelahasi ay dib u qabsadeen waxana ay arintani ay xalada ka dhigtay mid aad u adag, cidanka difaacu waxba nagama difaacin marna wuu soo gala marna wuu ka baxaa halkaasi si xun baa naloo laaya, waxa kale oo ay yidhaahdeen ilaa iyo goorma ayay dawladu aanay masuuliyadeeda ka soo baxayn.
Waxa uu kaga duwan yahay weerarkani weeraradi hore bay yidhaahdeen in kooxdaasi meelahi hore ay dib dagaalo ugu soo qaadeen, gaar ahaan dagmada ambaasal weerarka ay ku soo qaadeen kooxda tplf waxa ay ku dagalamayeen hub culus oo ay ku laayeen dad rayd ah oo tiro badan.
Maamulka magalada dhase mudane Abebe G/mesqel ayaa yidhi in kasta oo ay soo badanayaan dadka soo barokacayaashu hadana magaalada dhase wax weerar ah oo lagu soo qaaday ma jiraan.
Sida oo kale waxa u sheegay in ay u adeegsadeen booliska minishiyada iyo dhalinyaro hubaysan oo is kaashaday si ay uga hortagaan argagaxisada sida qarsoodiga ah u soo galaysa meelahaasi.
Wargayska addis maleda ayaa isku dayay in u tilifoon ku waraysto Siciid Axmed oo ah madaxa isgaadhsiinta ee gobolka koonfurta walo, maadaama tilifoonkii laga qaban waayay wax war ah oo la xidhiidha arimahan in uu ka waraysto wuu awoodi waayay.
Total views : 6982690